Neonatal Jaundice ( မှေးကငျးစကလေး အသားဝါခွငျး) အကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
Neonatal Jaundice ဆိုတာ မှေးကငျးစကလေးတှမှော တှရေ့တဲ့ အသားဝါခွငျးကို ချေါတာဖွဈပွီး သှေးထဲမှာ bilirubin လို့ချေါတဲ့ အဝါဓါတျ မြားနခွေငျးကွောငျ့ဖွဈတာပါ။ မှေးစကလေး ဆေးရုံတကျရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ ထိပျဆုံးကပါသလို နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးအနနေဲ့ အဝါဓါတျက ကလေးရဲ့ ဦးနှောကျကိုရောကျသှားရငျတော့ ကလေးလေးမှာ မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျးထိဖွဈနိုငျလို့ အရေးကွီးပါတယျ။
အဝါဓါတျ (bilirubin) ဆိုတာ ဘာလဲ?
သှေးထဲက RBC လို့ချေါတဲ့ သှေးနီဥ လေးတှေ အဆငျ့ဆငျ့ဖွိုခှဲခံရတဲ့အခါ ထှကျလာတဲ့ ပစ်စညျးပါ။ သှေးနီဥတှေ ဖွိုခှဲရာက ထှကျလာတဲ့ bilirubin ကို အသညျးမှာ conjugation လုပျကာ conjugated bilirubin အဖွဈပွောငျးပေးပီးအခြို့ကို ဆီးထဲမှာ စှနျ့ထုတျပီး အခြို့ကိုတော့ ဝမျးထဲမှာ စှနျ့ထုတျတာပါ။
ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျဆီးအရောငျ အဝါရောငျနဲ့ ပုံမှနျဝမျးအရောငျ အညိုရောငျကို ဖွဈစတောပါ။
မှေးစကလေးမှာ ဘယျလိုလက်ခဏာတှနေဲ့ တှရေ့မလဲ?
သှေးထဲက bilirubin level 34micro mol/L (2mg/dL) စကြျောတာနဲ့ အသားဝါတာကို စသတိပွုမိနိုငျပါတယျ။
-သငျ့ကလေးရဲ့ အရပွေား (skin) နဲ့ မကျြသားအဖွူ (sclera) ဝါခွငျး
-နို့စို့နညျးခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတှတှေရေ့မှာပါ။
Neonatal jaundice ချေါ မှေးစကလေး အသားဝါခွငျးကို -
2.Pathological Jaundice ဆိုပီး နှဈမြိုးခှဲလို့ ရပါတယျ။
Physiological Jaundice ဆိုတာဘာလဲ?
မှေးပီးပထမအပတျမှာ ကလေးရဲ့ သှေးထဲမှာ unconjugated bilirubin တှမြေားနလေို့ အသားဝါရတာပါ။ မှေးစကလေးတှရေဲ့ တဝကျလောကျမှာတောငျ တှရေ့လရှေိ့တဲ့အခွအေနတေခုပါ။
၁)အသညျးမှာရှိတဲ့ glucuronyl transferase လို့ချေါတဲ့ (unconjugated bilirubin တှကေို ရမှောပြျောဝငျတဲ့ conjugated အဖွဈပွောငျးပေးတဲ့) အငျဇိုငျးကောငျးစှာ အလုပျမလုပျသေးခွငျး၊
၂) မှေးစကလေးမှာ RBC ချေါ သှေးနီဥလေးတှရေဲ့ သကျတမျးဟာ လူကွီးတယောကျထကျ ပိုတိုခွငျး စတာတှကွေောငျ့ဖွဈတာပါ။ ဆယျရကျကြျောရငျ အလိုလိုအဝါဓါတျလြော့နညျးသှားပီး ကောငျးသှားမှာပါ။
ဒါကတော့ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျအသားဝါတာမြိုးမဟုတျဘဲ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ အကွောငျးတခုခုကွောငျ့ အသားဝါတာမြိုးပါ။ ဒီအခကျြတှရှေိနရေငျတော့ pathological jaundice သတျမှတျပါတယျ။
(၁) မှေးပီး ပထမ ၂၄နာရီကနေ ၄၈နာရီ အတှငျး အသားဝါပွီး နှဈပတျကြျောတဲ့ထိကွာခွငျး
(၂) သှေးထဲရှိ အဝါဓါတျ ပမာဏ (Total bilirubin >19.5mg/dL/ Direct bilirubin >2mg/dL (34 micro mol/L)
(၃) Serum bilirubin 5mg/day ထကျပိုတကျခွငျး
-မိခငျသှေးအုပျစုနှငျ့ ကလေးသှေးအုပျစု မတညျ့ခွငျး (ABO or Rh incompatibility)
- Cephalhaematoma လို့ချေါတဲ့ မှေးဖှားရခကျလို့ ခေါငျးမှာ သှေးခဲခွငျး
-G6PD လို့ချေါတဲ့ အငျဇိုငျးတမြိုး ခြို့တဲ့ခွငျး
-Breast-feeding Jaundice လို့ချေါတဲ့ မိခငျနို့တိုကျကြှေးတဲ့ ကလေးတှမှော တှရေ့တတျတဲ့ အသားဝါခွငျး
-Hypothroid လို့ချေါတဲ့ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးခြို့တဲ့ခွငျး
- မှေးရာပါ သညျးခွလေမျးကွောငျးကဉျြးခွငျး နှငျ့ အခွားအကွောငျးရငျးမြားစှာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
သှေးထဲမှာရှိတဲ့ အဝါဓါတျ (Serum bilirubin)ကိုဖောကျပွီး စဈဆေးကွညျ့နိုငျပါတယျ။ အသားဝါရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ သှေးစဈမှုတှေ စဈဆေးမှုတှလေညျး လိုအပျရငျ လုပျဖို့လိုမှာပါ။
(၁) Phototherapy ချေါ မီးရောငျဖွငျ့ကုသခွငျး - ခုနောကျပိုငျး LED မီးတှေ သုံးပီး ကုသလရှေိ့သညျ။ Phototherapy ပေးစဉျ ကလေးရဲ့ မကျြလုံးတှကေိုတော့ အုပျထားဖို့လိုပါတယျ။
(၂) Exchange tranfusion ချေါ သှေးလဲကုသခွငျး - သှေးထဲရှိ bilirubin 25mg/dL (428 micro mol/L) ကြျောရငျတော့ သှေးလဲကုသဖို့လိုပါပီ။ ကလေးဆီက အဝါဓါတျမြားနတေဲ့ သှေးတခြို့ကို ထုတျပီး အစားပွနျထညျ့ပေးခွငျးပါ။ ကလေးရဲ့ ခကျြမှာရှိတဲ့ သှေးကွောတှကေတဆငျ့ ပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
သခြောမကုသဘဲ အဝါဓါတျဦးနှောကျထဲ စရောကျရငျတော့ acute hyperbilirubinaemic encephalopathy လို့ချေါတဲ့ကလေးက နို့စို့တာနညျးခွငျး၊သာမနျထကျပိုမှိနျးခွငျး၊high pitched cry လို့ချေါတဲ့ အသံအကယျြကွီး ငိုပွီး ဂြီကတြာ ဖြားတာ သတိလဈ တကျသှားတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဝါဓါတျဦးနှောကျထဲရောကျတာ ကွာသှားရငျတော့ kernicterus လို့ချေါတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ဦးနှောကျထိခိုကျသှားပီး Cerebral palsy လို့ချေါတဲ့ လှုပျရှားမှုထိခိုကျအကွောသတောမြိုး ဉာဏျရညျထိခိုကျတာမြိုးစတာတှထေိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Neonatal Jaundice ဆိုတာ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အသားဝါခြင်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပြီး သွေးထဲမှာ bilirubin လို့ခေါ်တဲ့ အဝါဓါတ် များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ မွေးစကလေး ဆေးရုံတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါသလို နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အဝါဓါတ်က ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ကိုရောက်သွားရင်တော့ ကလေးလေးမှာ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းထိဖြစ်နိုင်လို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အဝါဓါတ် (bilirubin) ဆိုတာ ဘာလဲ?
သွေးထဲက RBC လို့ခေါ်တဲ့ သွေးနီဥ လေးတွေ အဆင့်ဆင့်ဖြိုခွဲခံရတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းပါ။ သွေးနီဥတွေ ဖြိုခွဲရာက ထွက်လာတဲ့ bilirubin ကို အသည်းမှာ conjugation လုပ်ကာ conjugated bilirubin အဖြစ်ပြောင်းပေးပီးအချို့ကို ဆီးထဲမှာ စွန့်ထုတ်ပီး အချို့ကိုတော့ ဝမ်းထဲမှာ စွန့်ထုတ်တာပါ။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဆီးအရောင် အဝါရောင်နဲ့ ပုံမှန်ဝမ်းအရောင် အညိုရောင်ကို ဖြစ်စေတာပါ။
မွေးစကလေးမှာ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမလဲ?
သွေးထဲက bilirubin level 34micro mol/L (2mg/dL) စကျော်တာနဲ့ အသားဝါတာကို စသတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။
-သင့်ကလေးရဲ့ အရေပြား (skin) နဲ့ မျက်သားအဖြူ (sclera) ဝါခြင်း
-နို့စို့နည်းခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာပါ။
Neonatal jaundice ခေါ် မွေးစကလေး အသားဝါခြင်းကို -
2.Pathological Jaundice ဆိုပီး နှစ်မျိုးခွဲလို့ ရပါတယ်။
မွေးပီးပထမအပတ်မှာ ကလေးရဲ့ သွေးထဲမှာ unconjugated bilirubin တွေများနေလို့ အသားဝါရတာပါ။ မွေးစကလေးတွေရဲ့ တဝက်လောက်မှာတောင် တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့အခြေအနေတခုပါ။
၁)အသည်းမှာရှိတဲ့ glucuronyl transferase လို့ခေါ်တဲ့ (unconjugated bilirubin တွေကို ရေမှာပျော်ဝင်တဲ့ conjugated အဖြစ်ပြောင်းပေးတဲ့) အင်ဇိုင်းကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်သေးခြင်း၊
၂) မွေးစကလေးမှာ RBC ခေါ် သွေးနီဥလေးတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ လူကြီးတယောက်ထက် ပိုတိုခြင်း စတာတွေကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဆယ်ရက်ကျော်ရင် အလိုလိုအဝါဓါတ်လျော့နည်းသွားပီး ကောင်းသွားမှာပါ။
ဒါကတော့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အသားဝါတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းတခုခုကြောင့် အသားဝါတာမျိုးပါ။ ဒီအချက်တွေရှိနေရင်တော့ pathological jaundice သတ်မှတ်ပါတယ်။
(၁) မွေးပီး ပထမ ၂၄နာရီကနေ ၄၈နာရီ အတွင်း အသားဝါပြီး နှစ်ပတ်ကျော်တဲ့ထိကြာခြင်း
(၂) သွေးထဲရှိ အဝါဓါတ် ပမာဏ (Total bilirubin >19.5mg/dL/ Direct bilirubin >2mg/dL (34 micro mol/L)
(၃) Serum bilirubin 5mg/day ထက်ပိုတက်ခြင်း
-မိခင်သွေးအုပ်စုနှင့် ကလေးသွေးအုပ်စု မတည့်ခြင်း (ABO or Rh incompatibility)
- Cephalhaematoma လို့ခေါ်တဲ့ မွေးဖွားရခက်လို့ ခေါင်းမှာ သွေးခဲခြင်း
-G6PD လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်းတမျိုး ချို့တဲ့ခြင်း
-Breast-feeding Jaundice လို့ခေါ်တဲ့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အသားဝါခြင်း
-Hypothroid လို့ခေါ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းချို့တဲ့ခြင်း
- မွေးရာပါ သည်းခြေလမ်းကြောင်းကျဉ်းခြင်း နှင့် အခြားအကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အဝါဓါတ် (Serum bilirubin)ကိုဖောက်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသားဝါရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ သွေးစစ်မှုတွေ စစ်ဆေးမှုတွေလည်း လိုအပ်ရင် လုပ်ဖို့လိုမှာပါ။
(၁) Phototherapy ခေါ် မီးရောင်ဖြင့်ကုသခြင်း - ခုနောက်ပိုင်း LED မီးတွေ သုံးပီး ကုသလေ့ရှိသည်။ Phototherapy ပေးစဉ် ကလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုတော့ အုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
(၂) Exchange tranfusion ခေါ် သွေးလဲကုသခြင်း - သွေးထဲရှိ bilirubin 25mg/dL (428 micro mol/L) ကျော်ရင်တော့ သွေးလဲကုသဖို့လိုပါပီ။ ကလေးဆီက အဝါဓါတ်များနေတဲ့ သွေးတချို့ကို ထုတ်ပီး အစားပြန်ထည့်ပေးခြင်းပါ။ ကလေးရဲ့ ချက်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကတဆင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
သေချာမကုသဘဲ အဝါဓါတ်ဦးနှောက်ထဲ စရောက်ရင်တော့ acute hyperbilirubinaemic encephalopathy လို့ခေါ်တဲ့ကလေးက နို့စို့တာနည်းခြင်း၊သာမန်ထက်ပိုမှိန်းခြင်း၊high pitched cry လို့ခေါ်တဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ငိုပြီး ဂျီကျတာ ဖျားတာ သတိလစ် တက်သွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝါဓါတ်ဦးနှောက်ထဲရောက်တာ ကြာသွားရင်တော့ kernicterus လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်သွားပီး Cerebral palsy လို့ခေါ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုထိခိုက်အကြောသေတာမျိုး ဉာဏ်ရည်ထိခိုက်တာမျိုးစတာတွေထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။